किन दुख्छ बच्चाको पेट ? – उज्यालो नेपाल Ujayaalo
May 15, 2018 उज्यालो नेपालLeaveaComment on किन दुख्छ बच्चाको पेट ?
त्यस्तै, वाकवाकी लाग्ने, ज्वरो आउने, तारन्तार दिसा लाग्ने, पेटको दायाँ कोखा दुख्नेलगायतका लक्षण देखाउँछ । सामान्यतया लक्षण देखिएको एक हप्तापछि हेपाटाइटिस ए हुन्छ । तर, यसको प्रमुख लक्षण भनेको दिसा–पिसाबमा पहेँलोपन आउनु हो । त्यसपछि आँखा, नङ, मुख र शरीर पनि क्रमशः पहेँलो बन्दै जान्छ ।हेपाटाइटिस ए भएमा प्रशस्त मात्रामा झोल तथा सफा र ताजा खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा आरामको जरुरत पर्छ । यसले कलेजोलाई कमजोर बनाउँछ । जथाभावी जडीबुटी तथा एलोपेथिक औषधिको प्रयोग गर्दा ज्यानै जान सक्छ ।
कब्जियतको समस्याले पेट नराम्ररी दुखाउँछ । दिसापछि केही हदसम्म दुखाइ कम हुन्छ । बच्चाले दिसाको वेला पीडा भएको गुनासो गर्नेबित्तिकै उपचारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । स्तनपान गर्ने बच्चाले ४–७ दिनमा दिसा गर्ने र दिसा सामान्य भएमा त्यसलाई समस्याको रूपमा लिनुहुँदैन । तर, बच्चालाई थुप्रिएर बसेको दिसा पूर्ण रूपमा बाहिर निकाल्ने, दिनहुँ शौच बस्ने बानी बसाउनुका साथै फाइबरयुक्त आहार र तरल पदार्थ खुवाउनुपर्छ ।